पैसाबाट सर्न सक्ने कोरोनाको संक्रमणबाट कसरी बच्ने ? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/पैसाबाट सर्न सक्ने कोरोनाको संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?
दैनिक रुपमा प्रयोगमा आएका पैसा मानिसको थुक, दिसापिसाब, खोकी तथा हाच्छ्युँ आदिबाट समेत दूषित हुन्छ। ब्याक्टेरिया कसरी विकसित हुन्छ विभिन्न कारणबाट पैसामा ब्याक्टेरिया फैलावट हुने इञ्जिनियर राम बाडेले बताए। उनका अनुसार पैसाको जथाभावी कच्याककुचुक गरी राख्ने गरेमा अझ बढी व्याक्टेरिया भाइरस फैलने सम्भावना हुन्छ।
नेपाली पैसाको प्रदूषणस्तर जाँच गर्दा प्रष्टै देखिने उनको भनाइ छ। कसरी कीटाणुरहित बनाउने पैसामा भएको ब्याक्टेरिया तथा भाइरसलाई विभिन्न तरिकाबाट हटाउन सकिने उनको भनाइ छ। इञ्जिनीयर बाडेका अनुसार ‘युभी रे टेक्नोलोजी’, ‘जेर्मिसाइड मेथोड’ र ‘प्लाज्मा आयोन टेक्नोलोजी’ बाट पैसालाई सहज रुपमा कीटाणुनाशक बनाउन सकिन्छ।